Sida loogu caddeeyo fiidiyowga barnaamijyadan bilaashka ah | Madasha Mobile -ka
Maaddaama tiknoolajiyadda laga helay gudaha taleefannada casriga ah ay sii xuubsiibatay, aaladdan ayaa noqotay beddelka ugu habboon ee kaamirooyinka fiidiyaha dhaqameedka iyo kamaradaha dhijitaalka ah ee is haysta. Si kastaba ha ahaatee waxay haystaan ​​baahi aysan xilligan xaadirin karin: zoom indhaha.
Waad ku mahadsan tahay horumarinta taleefannada casriga ah, aad bay u dhakhso badan tahay oo waa sahlan tahay in la hayo daqiiqadaha aan sida aadka ah u jecelnahay, si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood dagdag waa lataliyeyaal xun iyo fiidiyaha aan duubnay kama jawaabayo xaaladdii asalka ahayd, ama maxaa yeelay waxay ahayd mid diiradda la saaray, mugdi ah, waxaa loo duubay si toos ah ...
Haddii fiidiyaha si toos ah loo duubay, waxaan adeegsan karnaa codsiyo kala duwan oo noo oggolaanaya si fudud u rogaan fiidyowyada. Sidoo kale waa run fiidyowyada lagu toogtay mugdiga.
Si kastaba ha ahaatee, marka fiidiyowga aan si sax ah loo duubin diiradda, farsamada maanta ma shaqayso mucjisooyin, sidaa darteed ma aha lagama maarmaan in la isku mashquuliyo raadinta codsiyada naga caawiya dareenkaas.
Waxay u badan tahay in mustaqbalka iyo samaynta isticmaalka Sirdhaad dabiici ah, tani waxay awood u leedahay inay aqoonsato walxaha aan diiradda la saarin oo ay siiso qaab, sida horeba maanta loogu sameeyay sawirro xallintooda asalka ahi aad u yar tahay oo u oggolaanaysa in cabbirkeeda la weyneeyo, oo bixisa natiijo aad uga wanaagsan tii hore.
Caddee fiidiyow, Waa geedi socod fudud oo aan ku samayn karno ficil ahaan codsi kasta oo aasaasi ah oo noo oggolaanaya inaan tafatirno fiidiyowyada. Haddii aad rabto inaad ogaato aaladda aad u baahan tahay iyo codsiyada ugu fiican si aad u fuliso hawshan, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhriska.
1 Qalabka loo baahan yahay si loo iftiimiyo fiidiyaha
2 Barnaamijyada bilaashka ah si loo caddeeyo fiidiyaha
2.2 Tifatiraha fiidiyaha ee OpenShot (Windows / macOS / Linux)
2.3 Tifatiraha Fiidiyowga VSDC (Windows)
2.4 HitFilm (Daaqadaha)
Qalabka loo baahan yahay si loo iftiimiyo fiidiyaha
Halkan waxaan ku tusaynaa barnaamijyada ugu fiican ee bilaashka ah si loo caddeeyo fiidiyaha, laakiin marka hore, waa inaan ogaano waxa ay yihiin aaladaha noo oggolaan doona inaan fulinno hawshan.
Haddii aan rabno inaan caddeynno fiidiyow, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa wax ka beddel dhalaalka fiidiyaha. Marka xigta, waa inaan wax ka beddelnaa isbarbardhigga si natiijadu aysan u noqon mid aad u muuqata.
Codsiyada qaarkood waxay na siiyaan ikhtiyaarka Kiro otomaatig ah, ikhtiyaar si aad u fiican u shaqeeya inta badan iyo inay tahay inaan codsanno ka dib markaan wax ka beddelnay dhalaalka fiidiyaha.
Haddii aynaan jeclayn natiijada ama ay u muuqan weydo qurux ahaan, waan awoodnaa isticmaal nooc ka mid ah shaandhooyinka, haddii dalabku na siiyo ikhtiyaarkan, si loo siiyo taabasho u oggolaanaysa in la qariyo mugdiga fiidiyaha, illaa iyo inta natiijada aan helnay aysan ahayn tii aan raadinaynay.
Barnaamijyada bilaashka ah si loo caddeeyo fiidiyaha
Codsi cajiib ah oo gebi ahaanba bilaash ah oo aan ku awoodno tafatir fiidiyow kasta Waxaan ka helnaa Avidemux, codsi sidoo kale noo oggolaanaya isku dheji codka iyo muuqaalka.
Avidemux, kaliya ma awoodno ku dar filtarrada fiidyowyada, kuwaas oo ay ka mid yihiin shaandhaynta isbarbardhigga, laakiin sidoo kale waxay noo oggolaanaysaa inaan gooyo fiidiyowyada, u dhoofinno qaabab kale, tirtirno raadadka maqalka ama ku darno kuwo cusub ...
Avidemux ayaa diyaar u ah si bilaash ah u soo dejiso loogu talagalay Windows iyo macOS iyo Linux labadaba xidhiidhkan. Codsiga waxaa lagu turjumay Isbaanish, sidaa darteed luqaddu dhib ma noqon doonto si aad uga faa'iidaysato arjiga.
Tifatiraha fiidiyaha ee OpenShot (Windows / macOS / Linux)
OpenShot waa si buuxda oo dhammaystiran, il furan iyo tifaftiraha fiidiyaha oo dhammaystiran, oo ku dhashay 2008 Linux, laakiin maanta sidoo kale waa Waxay na siisaa noocyo Windows iyo macOS ah.
Sida tifaftiraha fiidiyaha wanaagsan oo qiimihiisu yahay milixdiisa, OpenShot waxaan ku samayn karnaa isbeddel xagga dhalaalka iyo ka soo horjeedda cadeeyo fiidiyowyada, marka lagu daro shaqooyinka aasaasiga ah sida jarista fiidiyowyada ama ku darista heesaha maqalka shaqooyin dhammaystiran si loogu daro saamaynta sida animations 3D ...
OpenShot la helaa loo tarjumay Isbaanish iyo luuqadaha kale ee 7aad waana ikhtiyaar aad u fiican in loo tixgeliyo beddelka codsiyada aadka u dhameystiran sida Adobe Premiere, Final Cut ama Filmora.
Tifatiraha Fiidiyowga VSDC (Windows)
Qalab kale oo fantastik ah oo aan haysanno markaan wax ka beddelayno dhalaalka iyo kala -duwanaanta fiidiyowyada ayaa ah VSDC Video Editor, codsi aan ku soo dejisan karno bilaash oo aan adeegsanno iyadoon xad lahayn (summadaha biyaha, xayeysiisyada, xayeysiisyada ...) taasina waxay nagu martiqaadaysaa inaan la shaqayno mashruuca qaddar yar oo ah 5 euro iyada oo loo marayo qaybta Caawinaadda.
Tifatiraha Fiidiyowga VSDC waa a tifaftiraha fiidiyowga aan tooska ahayn (waxay noo oggolaanaysaa inaan ku darno raadad fiidiyow oo kala duwan isla jadwalka), waxay la jaan qaadi kartaa inta badan qaababka fiidiyowga ee suuqa, waxay noo oggolaanaysaa inaan ku abuurno oo ku gubno DVD -yo abuuritaankeenna ...
Markay timaado dhoofinta waxa ku jira, waxaan ku samayn karnaa 4K iyo tayada HD, marka lagu daro waxay taageertaa qaabka H.265 kaas oo ciriirinaya baaxadda faylka kama dambaysta ah ee haysta badh kaas oo isticmaalaya koodh -dhaqameedka H.264 -dhaqameedka.
Filim waa mid ka mid ah ikhtiyaarrada xorta ah ee aan haysanno marka ay timaaddo wax ka beddel farqiga iyo dhalaalka fiidyowyada. Codsiga ayaa diyaar u ah soo dejin lacag la'aan ah, laakiin waxay noo oggolaanaysaa inaan ballaarinno tirada shaqooyinka annaga oo iibsanayno waxyaabaha lagu daro.
Si kastaba ha noqotee, si loo caddeeyo fiidiyowyada, looma baahna inaad wax iibsato kuwa ay na siiso. Haddii baahiyahaagu ay yihiin oo keliya in la caddeeyo fiidiyaha khaldan marmar, HitFilm waa codsi aad u fiican oo la tixgeliyo.
In kasta oo codsigan uusan bilaash ahayn, haddana wuxuu na siiyaa nooc tijaabo ah oo ku soo bandhigaya summad -biyoodka fiidyowyada aan tafatirno. Haddii tani aysan dhibaato ahayn, waxaan u adeegsan karnaa nooca bilaashka ah ee codsigan nadiifi fiidiyowyada mugdiga ah ee aan duubnay iyo dhacdo ahaan, ku dar saamaynta adoo siinaya fikirkayaga xorta ah.
Filmora X waa diyaar u ah Windows 7 64-bit iyo wixii ka dambeeya iyo macOS. Iyada oo mareegtooda ah, waxay na siisaa taxane ah casharro xiiso leh taasi waxay ina baraysaa inaan qaadno tallaabooyinkeenna ugu horreeya ee adduunka tafatirka fiidiyaha.
iMovie waa codsi fiidiyaha Apple ee bilaashka ah, codsi loo heli karo macruufka iyo macOS labadaba, in kasta oo noocaan ugu dambeeyay uu yahay kan keliya ee noo oggolaanaya wax ka beddel nuurka iyo isbarbardhigga labadaba ee fiidyowyada. Si aad u isticmaasho codsigan, waxaa lagama maarmaan ah oo kaliya inaad yeelato koonto Apple ah.
Codsigan waa tifaftire awood leh ka bilow adduunka daabacaadda, oo bixiya shaqooyin tiro badan Sawirka ku jira shaqada Sawirka, baabi'inta asalka cagaaran si kor loogu qaado fiidiyowyada ama sawirrada asalka ah ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Barnaamijyada » Sida loo iftiimiyo fiidiyowga barnaamijyadan bilaashka ah
Sida loogu xiro moobiilka Xiaomi kombiyuutar